Abaphathi bemagnethi Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ukuphatha Amagnethi Factory
Kulula ukubeka nokukhipha ophakamisa uzibuthe entweni eyinsimbi ngesibambo se-ON / OFF. Awekho ugesi owengeziwe noma amanye amandla adingekayo ukushayela leli thuluzi lamagnetic.
Ephathekayo Permanent Magnetic Hand Lifter for Transshipping Metal Plates
I-Magnetic Handlifter ehlala njalo ikwenze kwaba nokwenzeka ukusetshenziswa kwamapuleti ezinsimbi ekukhiqizeni i-workshop, ikakhulukazi amashidi amancane kanye nezingxenye ezibukhali noma ezinamafutha. Isistimu kazibuthe ehlanganisiwe inganikela ngamandla we-50KG wokulinganisa okuphakanyisiwe nge-300KG Max edonsa amandla.
I-Yellow Pilot Ladder Magnet yathuthukiswa ukwenza impilo iphephe kubashayeli bezindiza zasolwandle ngokunikeza amaphuzu okusimisa okususelwa ezitebhisini ohlangothini lomkhumbi.
Lokhu okuheha uzibuthe kungabamba izingcezu zensimbi / zensimbi noma izinto zensimbi kuziphuzo, ngampuphu noma phakathi kwezinhlamvu kanye / noma ama-granules, njengokuheha izinto zensimbi ezivela kubhavu we-electroplating, ukwahlukanisa izintuli zensimbi, izigaxa zensimbi kanye nokufakwa kwensimbi kusuka emathangeni.
Umzingeli oyindilinga kazibuthe wenzelwe ukuheha izingxenye zensimbi ezivela kwezinye izinto. Kulula ukuxhumana ongaphansi ngezingxenye zensimbi eziyinsimbi, bese udonsa isibambo ukulanda izingxenye zensimbi.
Lesi sibambi sokubuyisa sikanxande singadonsela izingcezu zensimbi nezensimbi ezifana nezikulufo, izikulufo, izinzipho, kanye nezinsimbi ezilahliwe noma izinto ezihlukile zensimbi nezensimbi kwezinye izinto.